हामी टेलिभिजन खोल्न सक्दैनौँ किनकि हामीसँग करोड छैन : ओली « News24 : Premium News Channel
हामी टेलिभिजन खोल्न सक्दैनौँ किनकि हामीसँग करोड छैन : ओली
काठमाडौं । आइतबार नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीले काठमाडौंमा देउसी भैलो तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षकको केन्द्र बिन्दु थिए, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।
सुरुमा आफ्नो व्यस्तताका बीच पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा औँधी खुसी लागेको अध्यक्ष ओलीले सुनाए । कर्णालीलाई गायन, नृत्य बाद्य वादनलाई जीवित राख्ने सबैलाई ओलीले धन्यावद दिए । र, कर्णालीबासी र देशवासी सबैलाई पुनः ओलीले शुभकामना दिए ।
त्यसपछि उनले चाँडपर्वहरुबारे आफ्ना धारणा राखे । समयक्रमअनुसार चाँडपर्वहरुको बेग्लै पहिचान झल्किएको उनले बताए । धारणा राख्ने क्रममा राज्य सत्ताबारे उनले धारणा राखे ।
समाजलाई यथास्थितिमा राखेर सुरक्षा प्रदान गर्न राज्यले दुईवटा प्रबन्ध गरेको ओलीको भनाइ थियो । पहिलो प्रहरी, सेना, अदालत, जेलमार्फत शासन गर्छ र यथास्थिति समाजलाई बचाउछ । अर्काे, चेतनाको पाटो । यसतर्फ रेडियो, टि.भी. सामाजिक सञ्जालहरु पर्ने ओलीले बताए ।
चेतनाबारे थुप्रै कुराहरु भनेका ओली टेलिभिजन र त्यसको सञ्चालकमाथि खनिए । उनले आफूसँग टेलिभिजन चलाउने पैसा पनि नभएको र चलाउन नसक्ने पनि बताए ।
तर, अहिले टेलिभिजन कस्ले चलाएको भन्ने आवाज सुनेरै थाहा पाइने पनि ओलीले व्यंग्य गरे ।
ओलीको बोली जस्ताको तस्तै :
यथास्थितिवादलाई सहयोग पुर्याउने होइन अघि बढ्ने कुराहरु आकर्षक गीत र अरु माध्यमबाट चेतना फैलाउन सक्दछौँ । र, त्योचाहीँ अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छ । हामीसँग धेरै सञ्जाल छैन । हामी टेलिभिजन खोल्न सक्दैनौँ किनकि हामीसँग करोडौँ छैन । महिनैपिच्छे कति करोड खर्च हुन्छ । कहाँबाट गर्ने ? हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ । विचार धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईहरुले याद गर्नुभएको छ छैन–यहाँहरुले यहाँ धेरै दक्षिणा दिनुभयो । दक्षिणा दिऊ दिऊ लाग्यो कहाँ दिऊ कहाँ नदिऊ लाग्यो । यहाँ पुग्ने त्यहाँ पुग्ने तर, आम्दानी थोरै छ । हामीलाई त्यस्तो समस्या छ टेलिभिजन कहाँबाट खोल्ने ? पार्टीका कार्यहरु महाधिवेशन, सभालाई त धौँधौँ परिराछ भने हामीले अतिरिक्त करोडौँ, अर्ब खर्च गरेर टिभी चलाउन सक्दैनौँ ।
नयाँ नयाँ चिजहरु आइरहेका तिनीहरुको आवाज सुन्नुस्, ती को हुन् ? र, तिनलाई कस्ले चलाएको छ भन्ने कुरा आवाज सुन्नुस् के आवाज हो भन्ने कुरा यसै थाहा पाउनुहुन्छ । टेलिभिजन खोल्नुस्, त्यसको आवाज सुन्नुस् । त्यसको आवाजले नै भन्छ कस्ले चलाएको ? कस्का लागि चलाएको ? कस्का विरुद्ध चलाएको ? जनता अल्मलाउन र झुट फैलाउन चलाएको छ । मैले नाम नलिउ त्यस्ता थुप्रै छन् ।